Semalt Expert momba ny fisorohana ny milina fikarohana avy amin'ny Indexing WordPress Blog
Ny tanjon'ny fanombohana blôgy ho an'ny olona maro dia ny hanana fifamoivoizana betsaka araka izay azo atao. Ho an'ny sasany, toa toa nofinofy raha toa ka mampiditra ny votoatiny i Google. Noho izany, manontany antsika ny fanontaniana hoe: maninona no misy olona maniry ny tsy hanana tranonkala nosoratan'ireto karazana fikarohana ?
Ross Barber, manam-pahaizana ambony indrindra amin'ny Semalt , dia mamaritra ny antony sasany amin'ny fampitsaharana ireo fitaovam-pitadiavana amin'ny fikajiana ny tranonkalanao sy ny fomba hanaovana izany.
Raha vao manomboka, ary mbola mbola vaovao ihany ny blôgy, dia misy ny vintana avo lenta amin'ny hoe miasa amin'ny tranokala ianao ary mamoaka ny votoaty avy any. Mandroso mialoha, mety ho hitanao fa ny votoaty napetrakao dia tsy tonga lafatra ary tsy maniry ny olon-kafa satria mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fitokisana anao. Ny vahaolana tokana azonao eritreretina dia ny hanesorana ny tranonkala tsy hiseho amin'ny valin'ny fikarohana Google raha tsy efa nanolotra ny fahaiza-mamaky ny blôginao ianao, ary efa vonona ny olona hahazo ny tranokalanao. Ireto manaraka ireto misy fomba vitsivitsy amin'ny fomba fanaovana izany:
Dingana 1. Ahenao ny motera Searching amin'ny WordPress Indexing
Ny hevitra ao ambadik'ity dia ny hanakana ny fitaovam-pitadiavana tsy hikirakira ny tranokala amin'ny toerana voalohany. Misy fomba roa azo ampiasaina:
Fomba 1: Misy endri-javatra nampidirina ao amin'ny WordPress izay manakana ny fitaovan'ny fikarohana tsy hikirakira ny tranokala.
Sokafy ny sehatry ny Admin ao amin'ny WordPress ary fidio "Mamaky" avy amin'ny faritra fanovana. Ao amin'ny "sari-tranonkala fikarohana", misy sombin-tsoratra iray izay manosika ny mpampiasa "hanakanana ny fitaovam-pikarohana amin'ny fikajiana ny tranonkala." Raha vantany vao voamarinao ity boaty ity, tsindrio ny save sy ny fivoahana.
Fomba 2: Raha tianao ny fomba fikarohana hafa, ny fanitsiana ireo robots.txt dia safidy tsara kokoa ho anao..
Karohy ireo robots.txt ao amin'ny tranonkala ahafahanao miditra amin'ny mpandrindra ny rakitra. Ampiasao ny famantarana (User-agent: *, ny fidirana fidirana, ary ny famerenana: /), mba hitazonana ny milina fikarohana tsy hikirakira ny tranonkala.
Dingana 2. Fiarovana ny tenimiafina
Ny fitaovam-pikarohana sy ny mpitsikilo dia tsy afaka miditra amin'ny tranokalam-pandrakandron'ny tenimiafina. Ampiasao ireto fomba manaraka ireto hamoronana tenimiafina:
Fomba 1: Ny serivisy fampiantranoana dia manana traikefa miaro ny tenimiafina voaaro izay mora ampiasaina. Hostinger sy cPanel dia manana dingana toy izany.
Indray mandeha ao amin'ny tontonana fanaraha-maso fametrahana ny sehatra misy ny safidy mba hiarovana ny lahatahiry. Rehefa mikitika ny bokotra dia misy varavarankely vaovao miseho amin'ny lisitry ny rakitra, izay misafidy "public_html." Kitiho ny bokotra "miaro", ary mialà.
Metatra 2: Azonao atao ny mampiasa ny plugin WordPress toy ny WordFence, na ny Protect Password mba hahatratrarana vokatra mitovy. Ataovy azo antoka fa mety amin'ny daty alohan'ny hametrahana izany. Rehefa vita ny fametrahana, mamorona tenimiafina ho an'ny tranokala, ary ny zavatra rehetra dia ho azo antoka tsy hikirakirana.
Dingana 3. Fanesorana pejy nalaina avy amin'ny Google
Indraindray ny Google dia manondro toerana iray manohitra ny fanirian'ny tompony. Misy fomba iray hamerenana izany, saingy mitaky ny fametrahana ny Google Search Console ho an'ny tranonkala voatondro voalohany. Aorian'ny fanapahan-kevitra ao amin'ny tranonkalanao izay tianao hofafana dia alefaso amin'ny "Alefaso ny URL" eo ambanin'ny tabilao "Google Index". Ao anaty boaty anaty vidiny, alefaso ny URL an'ny tranonkala ary tsindrio ny manohy. Misafidiana ny fotoana voafetra ny pejy tsy hikirakira ary manolotra ilay fangatahana
Tsy mampaninona ny antony tokony hisorohanao ny fitaovam-pikarohana tsy hikirakira sy ny fampidirana ny fampahalalana ao amin'ny tranokalanao. Ny dingana natolotra dia hanampy anao hahatratra izany marina izany. Ny sasany dia mety tsy manome ny vokatra tsara indrindra fa manompo ny tanjona voafaritra Source .